Wararka - Relience waxay ku baraysaa sida loo doorto agabka baabuurta jiilaalka oo tayo leh
Marka cimiladu sii qabowdo oo qabowdo, dadku waxay bilaabaan inay baabuurtooda ku beddelaan "dharka jiilaalka". Waqtigan xaadirka ah, noocyada kala duwan ee baabuurta "dharka jiilaalka" ayaa keenay xilliga iibka ugu sarreeya. Intaa waxaa dheer, ka hor inta aysan gelin jiilaalka, milkiilayaasha baabuurtu waa inay hore u sii dayactiraan baabuurtooda.
Beddel barkinnada jiilaalka si aad baabuurka uga dhigto mid kulul
Waxaa la fahamsan yahay in cimiladu ay sii xumaanayso oo qabow badan tahay, dad badan oo baabuur leh ayaa subaxdii fadhiya baabuurka waxay dareemaan qabow, waxay qaadataa waqti dheer in la helo diirimaad. Sidaa darteed, milkiilayaasha baabuurku waxay rabaan inay baabuurka ku beddelaan barkin jiilaalka. Si kastaba ha ahaatee, wajiga suuqa ee noocyada kala duwan ee barkimooyinka, milkiilayaasha baabuurtu ma awoodaan inay doortaan.
Barkinta ayaa ah kan ugu dhow milkiilaha baabuurka, sidaas darteed, marka uu jiilaalku yimaado, waxa ugu horreeya ee ay tahay in la beddelo waa barkinta baabuurka. Waqtigan xaadirka ah, suuqa ayaa barkinta barkinno badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan barkin dhogorta ka samaysan, barkin dhogor macmal ah, barkin hoose, barkin dhogor saafi ah. Baabuurka dhaqaalaha wuxuu dooran karaa barkin dhogorta caadiga ah, dharka kartoonada, barkinta dhogorta, barkinta hoose iyo qiimaha kale ee dhexdhexaadka ah, baabuurka sare wuxuu dooran karaa barkin dhogor saafi ah.
Ku dadaal baabuurka dhaqida iyo dhuka si aad baabuurka uga dhigto mid dhalinyaro badan
Milkiilayaasha baabuurta badan ayaa khibrad u leh in baabuurkooda asalka ah ee dhalaalaya oo qurux badan, kaliya hal sano ama wax ka badan ayaa muujiyay xaaladdii hore. Falanqaynta xirfadlaha ah, haddii jidhku inta badan aanu nadiif ahayn, hadhaaga ayaa lagu dhejin doonaa kuwa kor ku xusan, ka dib markii roobku biyo raaciyo, gaar ahaan roobka ay ku jiraan acid iyo alkali, rinjiga jirku wuxuu noqon doonaa oxidation, ifafaale midab leh. Oo ka dib xilliga jiilaalka, roobka iyo barafka ee ka kooban rinjiga baabuurku wuxuu leeyahay waxyeello badan, waxaa lagu talinayaa in milkiilayaasha ay marka hore nadiifiyaan jirka oo nadiif ah, haddii ay dhacdo xaalado, waxaad samayn kartaa daawaynta glaze ee gaariga, sidaas darteed in sameynta filimka difaaca mesh, ay u adkeysan karto heerkulka sare, acid iyo alkali, anti-corrosion.
Xirfadlayaasha, baabuurta cusub ayaa ugu fiican in la isticmaalo shamac midab leh si loo ilaaliyo dhalaalka iyo midabka jidhka, marka jawigu xun yahay, waxa aad u habboon in la isticmaalo dhuka resinka oo leh ilaalin aad u fiican. Isla mar ahaantaana, doorashada dhuka waa in sidoo kale la tixgeliyaa si loo waafajiyo midabka rinjiga baabuurka. Intaa waxaa dheer, khubaradu waxay xasuusinayaan milkiilayaasha baabuurta, roobka iyo cimilada barafka, sida in la dhigo goobta baabuurta la dhigto ee furan, waxaa lagula talinayaa in baabuurka la dhigo meel ka fog geedaha, tirarka; waqti dheer oo la dhigto, waxaa lagu talinayaa in la dhigo "jaakad" baabuurka si looga hortago boodhka iyo nabaad-guurka roobka.
Hubi oo beddel dareerayaasha si aad u kululaato baabuurka jiilaalka
Jirka ka sokow, dareeraha baabuurka waa in uu ka duwanaado isbeddelka xilliyada. Tusaale ahaan, biyaha galaaska, sida ku cad barta qaboojinta waa in loo qaybiyaa isticmaalka jiilaalka iyo isticmaalka xagaaga. Biyaha dhabta ah ee dhalada ah maaha mid fudud sida saabuunta, kaas oo leh glycol, acids organic iyo maaddooyinka kale, oo leh barafka ka hortagga, marka lagu daro doorka caagga ah. Gaar ahaan xilliga jiilaalka, milkiilayaasha baabuurta woqooyi saaxiibadood waa inay isticmaalaan -35 ℃ biyo galaas ah.
Intaa waxaa dheer, hubi inaad hubiso baabuurka ka hortagga barafka. Qaboojinta qaboojiyaha xagaaga, kombuyuutar, kondenser inta badan la isticmaalo, dayrta dambe iyo jiilaalka hore, A/C ee qaboojiyaha asal ahaan lama isticmaalo, markaa hubi inaad si fiican u hubiso oo aad nadiifiso dhammaan qaybaha nidaamka qaboojiyaha, gaar ahaan kondenser-ka, hawada shaandhada qaboojiyaha way fududahay in lagu kaydiyo walxaha wasakhda ah, taasoo keenta ur baabuurka.